Saddex Xidig Oo PSG Ah Oo Min Laba Gool Dhaliyay, Taageerayaashii Garoonka Loo Ogolaaday Iyo Afar Bilood Kadib Oo Ay PSG Ciyaartay. - Gool24.Net
Saddex Xidig Oo PSG Ah Oo Min Laba Gool Dhaliyay, Taageerayaashii Garoonka Loo Ogolaaday Iyo Afar Bilood Kadib Oo Ay PSG Ciyaartay.
Kooxda PSG ayaa ugu danbayn kulan ciyaartay muddo afar bilood ah kadib markii ay xasuuq naxariis daro ah u gaysteen kooxda Le Havre waxayna PSG guul ku gaadhay 9-0.
Inkasta oo hore loo joojiyay kubbada cagta France isla markaana waqtigii go’doonka fayraska karoonaha xili ciyaareedkii la xidhay waxay ugu danbayn ciyaartoyda PSG heleen fursadii ugu horaysay ee ay muddo dheer kubbada cagta ku ciyaareen.
PSG ayaa kooxda heerka labaad ee Le Havre waxay u gaysteen tacadigii ugu waynaa kadib markii ay qaybtii hore oo kaliya ay ka dhaliyeen shan gool waxaana kulankan min laba gool dhaliyay saddex ciyaartoy oo PSG ka tirsan.
Mouro Icardi oo ahaa xidigii daah furay gool dhalinta daadka ahayd ee PSG ayaa laba gool kulankan ka dhaliyay waxaana sidoo kale faanka goolasha ee kooxda reer Paris qayb ka noqday Neymar Jr.
Laakiin Icardi iyo Neymar may ahayn labada xidig ee min laba gool dhaliyay balse sidoo kale Sarabia ayaa isna laba gool dhaliyay.
Daqiiqadii 8 aad Icardi ayaa dhaliyay goolkii furitaanka ee PSG laakiin waxa uu goolkiisa labaad raaciyay daqiiqadii 19 aad ee aybtii hore waxaana goolka saddexaad dhaliyay Neymar Jr oo daqiiqadii 22 aad ciyaarta ka dhigay 3-0.
Mbappe ayaa daqiiqadii 29 aad ee qaybtii hore dhaliyay goolka kaliya ee uu kulankan ka dhaliyay kaaas oo ahaa goolka afraad ee kooxdiisa PSG laakiin Neymar Jr ayaa goolka shanaad raaciyay daqiiqadii 43 aad ee dhamaadkii qaybtii hore.
Laakiin waxaa gool dhalinta PSG qaybtii labaad sii waday Sarabia oo laba gool dhaliyay daqiiqadihii 52 aad iyo 61 aad halka Kalimuendo uu isna gool dhaliyay daqiiqadii 59 aad.
Waxayna PSG heshay fursadii ugu horaysay ee ay iskugu diyaarinayso tartanka Champions league ee ay bisha soo socota ay ciyaari doonto maadaama oo ayna helin fursad la mid ah kooxaha horyaalada kale ee kulamada badan kaga soo kabsaday go’doonkii fayraska.
Ilaa 5000 kun oo taageerayaal ah ayaa loo ogolaaday in ay ka soo xaadiraan kulamada saaxiibtinimo ee France waxayna jamaahiirta PSG heleen fursadii ugu horaysay ee ay ciyaartoyda kooxdooda ku daawadeen muddo afar bilood ah.